Thwebula SHAREit 3.5.48_ww – Android – Vessoft
Isigaba: Ukwabelana ngefayela
Ikhasi elisemthethweni: SHAREit
SHAREit – a isofthiwe esilungele ukwabelana esisheshayo amafayela. Isofthiwe kudala Wi-Fi iphuzu futhi ubonisa uhlu amadivaysi axhumene, okuyizinto ezingabasiza ukuba ukushintshanisa amafayela letingemasayizi lahlukene. SHAREit isekela ukudluliswa kwedatha kwikhompyutha kanye namadivayisi eziningi kanyekanye. Isofthiwe iqukethe umsebenzi okuvumela ukudlulisa idatha kusuka kudivayisi eyodwa kuya kwenye. SHAREit ine interface enembile futhi kulula ukuyisebenzisa.
Fast exchange idatha
Umsebenzi ukuthumela idatha kwenye idivaysi
Amazwana ku SHAREit
SHAREit software ehlobene
I-Imgur – isoftware yokulayisha izithombe ezihlukile kanye ne-GIF-animation kusevisi ethandwayo. Isoftware yenza ukubeka ukuthanda nokuphawula kokuthunyelwe.
I-BBM – isithunywa esithandwayo ukuxhumana nabangane bamadivayisi weBlackBerry, i-Android ne-iPhone. Isoftware isekela izinto eziningi ezilusizo zemiyalezo elula.
I-ProtonMail – iklayenti le-imeyili elingadingi idatha yomuntu siqu yokubhalisa futhi isebenzisa ukubethela okungenasiphelo kokuxhumana okuphephile.
Advanced download Manager – imenenja elula yokulanda idatha yezinhlobo ezahlukahlukene. Isoftware isebenzisa ama-algorithms akhethekile wokulanda ngokushesha ifayela.
I-Snapseed – Isihleli sesikrini esinokukhethwa okuningi kwamathuluzi, okokuhlunga okuhlukahlukene kanye nesethi yokuhlanganiswa okuzenzakalelayo ukwenza ngcono ikhwalithi yezithombe nokushiyeka okungalungile kwezithombe.
Isofthiwe popular ukulalela eziteshini eziyizintandokazi zakho zomsakazo emhlabeni wonke kanye nekhono ukuzivumelanisa izintandokazi musical umsebenzisi.
Lo mdlalo ukuze unakekele impilo, inhlalakahle, amandla nezinye izici isilwane. Umdlalo kuvula okunezinhlobonhlobo eziningi izinto ezahlukene pet virtual.